अ’ग्नि नियन्त्रकहरुले २० करोड वर्ष पुरानो झण्डै २ सय रुख कसरी बचाए ? – Khabarhouse
अ’ग्नि नियन्त्रकहरुले २० करोड वर्ष पुरानो झण्डै २ सय रुख कसरी बचाए ?
Khabar house | ४ माघ २०७६, शनिबार ०८:३८ | Comments
काठमाण्डौ – अस्ट्रेलियामा आ’गलागीका कारण ठूलो क्ष’ति हुँदा एउटा राम्रो समाचार पनि प्राप्त भएको छ । आग’लागीका कारण ५० लाख एकड क्षेत्रमा फैलिएको जङ्गल नष्ट भइ सकेको छ । तर अ’ग्नि नियन्त्रकहरु झण्डै दुई सय वटा प्राचीन र महत्वपूर्ण रुख बचाउन सफल भएका छन् । वोलेमी पाइन प्रजातिको यी रुखलाई स्थानीयले ‘डाइनाेसर ट्रीज’ को नाम पनि दिएका छन् ।
यी रुखहरु २० करोड वर्ष देखिकाे पुरानो भएको मानिएको छ । जङ्गल आसपासको आगो निभाए पछि अग्नि नियन्त्रकहरु हेलिकोप्टर मार्फत जङ्गलको बीच यी रुख रहेको ठाउँसम्म पुग्न सफल भए । न्यु साउथ वेल्सका पर्यावरण मन्त्री म्याट केनका अनुसार वोलेमी पाइन्स रुख विश्वमा केवल ब्लु माउन्टेन्सको जङ्गली इलाकामा मात्र पाइन्छ । यस्ता मात्र दुई सय वटा रुख बचेका छन् । तर यी रुख रहेको वास्तविक क्षेत्र गोप्य राखिएको छ ।
कसरी बचाइयो ती रुख ? आ’गलागी हुने बित्तिकै ती रुख बचाउनको लागि एक अपरेशन सुरु गरिएको केनले बताए। आगो ती रुखतर्फ बढिरहेको थियो। अग्नि नियन्त्रकहरुले पहिला ‘वाटर बम्बिङ्ग जेट’ को सहायता द्वारा ती रुख वरिपरि पानी र आगो निभाउने फोम छर्किए । आगो कम भइसकेपछि उनीहरु जङ्गलभित्र छिरे । डाइनाेसर ट्रीज ननिक जेनेरेटरबाट चल्ने एक सिँचाइ प्रणाली लगाए, जसका कारण रुखमा आगाेकाे प्रभाव कम पराेस् ।
२६ वर्ष अघि ती रुखहरु अझै पनि अस्तित्वमा छन् भन्ने कुरा थाहा भएको केनले बताए । त्यसअघि यी रुख लोप भइसकेको बताइन्थ्यो । न्यु साउथ वेल्स ग्रामीण अग्नी सेवाका कमिस्नर शेन फिट्जसिमन्सले वर्षाका कारण अग्निशमन विभाग, आपतकालीन सेवाकर्मी र आ’गलागीबाट प्रभा’वित मानिसहरुमा राहत भएको बताए । तर यसले आगो नियन्त्रणमा लिन रणनीतिक र प्राविधिक हिसाबमा चुनौती पनि भएको छ ।